jeudi, 07 mai 2020 21:52
Fampianarana: Nanapa-kevitra ny hikatona indray ireo sekoly tsy miankina sasany
Manoloana ny fitombon’ny tranga vaovao Covid-19 dia misy sekoly tsy miankina, izay efa nampianatra ireo mpianatra amin’ny kilasy hiatrika fanadinam-panjakana amin’ny faran’ny taom-pianarana, no nanapa-kevitra ny hampiato ny fampianarana ao aminy manomboka ny zoma 8 mey 2020 mandram-pisy fandaminana vaovao.
Anisany hikatona ny Collège Ny Aina Anosisoa Ambohimanarina – Antananarivo, izay nanao fampilazana ny ray aman-dreny, ary nanamafy izany tamin’ny tambazotran-tserasera sosialy facebook.
Nankasitraka io fanapahan-kevitry ny sekoly io ny ray aman-drenin'ny mpianatra, izay feno tebiteby rehefa nandre fa nisy tranga vaovao miisa 35 araka ny tatitra nambaran'i Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle avy eny amin'ny CCO Ivato androany.
jeudi, 07 mai 2020 21:17
Parlemantera frankofonina: Nijery miaraka ireo fepetra tokony ho raisina ho fanatsarana ny vokatra aterik’io Covid-19 io
Nanatrika ny fivoriana Parlemantera frankofonina mikasika ny ady amin’ny valan’aretina Cpvid-19 izay notanterahina tamin’ny alalan’ny fomba fifandraisan-dafitra ny Antenimierandoholon'i Madagasikara, izay nisoloan-tenan’ny Loholona Pierrot Rajaonarivelo Filohan’ny Vaomiera Fifandraisana iraisam-pirenena, ny alarobia 6 may 2020.
Fivoriana nokarakarain’ny vondron’ny Banky Iraisam-pirenena (GBM) izay miara-miasa amin'ny parlemantera, mba hijerena miaraka ireo fepetra izay tokony ho raisin’ny parlemantera ho fanatsarana ny vokatra aterik’io valan’aretina Covid-19 io amin’ireo firenena marefo sy misedra olana.
jeudi, 07 mai 2020 21:05
Besely - Belo Tsiribihina: Zaza 5 voan'ny tazomoka navotan’ny Tafika nentina namonjy hopitaly
Nisy zaza 5 voan'ny tazomoka tao amin'ny Fokontany Besely, Kaominina Belo Tsiribihina ny 06 may 2020. Raha vao nahazo fampandrenesana dia nanampy ireo Fokonolona nitondra ireo zaza tao amin'ny hopitaly Belo Tsiribihina ny miaramilan'ny ZRPS Bravo BOA B2. Efa tsaboina ao amin'ny hopitaly ireo zaza ireo amin'izao fotoana izao.
jeudi, 07 mai 2020 20:51
EPP Maurice Guyot – Toamasina: Havaozina hanarapenitra
Ny taona 1935 no niorina ny EPP Maurice Guyot, ary isany antitra eto Toamasina ity sekoly ity. Nahita maso ny fahanteran’ny fotodrafitrasa ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny diany teto Toamasina. Nambarany fa hamboarina ho manarapenitra ity sekoly ity. Horaisina ho mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra FRAM miisa 09 miasa ao amin’ity EPP ity.
Misy mpianatra 282 sy mpanabe miisa 19 ao amin’ny EPP Maurice Guyot. Nizarana rakibolana vaovao ireo mpianatra hiatrika fanadinana CEPE ao.
jeudi, 07 mai 2020 20:01
CEDEAO: Nanao fanambarana fa tsy nanafatra Covid Organics
CEDEAO: Nanao fanambarana fa tsy nanafatra Covid Organics.
jeudi, 07 mai 2020 20:00
Antsirabe: Notazomina ao amin'ny hopitaly mandritra ny 14 andro izy efa-mianaka avy any Ambatovy
Efa noraisin'ny CHRR Antsirabe an-tànana ireo olona efa-mianaka avy any Ambatovy. Lehilahy 27 taona, vehivavy 25 taona, ankizy 5 taona sy 8 volana.
« Négatifs » ny valin’ny fitiliana TDR natao azy 4 mianaka. Tsy maintsy notazomina ao amin'ny hopitaly mandritra ny 14 andro anefa noho izy ireo avy any amin'ny toerana izay efa nohidiana tanteraka, ary miandry ny valin'ny fitiliana PCR nalefa any amin'ny Institut Pasteur.
Fitiliana PCR miisa 11 no andrasana dia ny azy 4 mianaka, sy ireo 3 nampiantrano azy tao Ambohimena-Antsirabe ary ireo 4 hafa nifanerasera taminy tao an-tanàna. Ny valin'ny fitiliana avy any amin'ny Institut Pasteur no ahalalana na mitondra na tsy mitondra ny tsimokaretina Coronavirus ireo olona ireo.
jeudi, 07 mai 2020 15:10
Vatsy Tsinjo: Mitontaly 290 000 no nozaraina tamin'ireo Faritra telo voakasiky ny Covid 19
Vatsy Tsinjo miisa 225 000 no nozaraina ho an'ny Faritra Analamanga, 30 000 ho an'Atsinanana ary 35 000 ho an'i Matsiatra Ambony. Mitontaly 290 000 ny Vatsy Tsinjo nozaraina tamin'ireo Faritra telo voakasiky ny Covid 19 ireo.
Nofaranana tao amin'ny Distrikan'i Lalangina ny 06 may 2020 ny fizarana ireo Vatsy Tsinjo sy Tambavy CVO ho an'i Matsiatra Ambony.
Mpirotsaka an-tsitrapo miisa 425, izay ahitana mpiasam-panjakana, mpitandro filaminana, mpiasan'ny Office Régional de la Nutrition (ORN) ary mpitaona entana no nifarimbona nizara isan-tokantrano, nitety tanàna, notarihin’ny Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony.
Teo ihany koa ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana sy olon-tsotra izay nanolotra fanampiana nampiarahana tamin'ny Vatsy Tsinjo ho an'ireo fianakaviana marefo.
jeudi, 07 mai 2020 15:03
07 may 2020: Andro manerantany iadiana amin'ny aretina sohika
07 may 2020: Andro manerantany iadiana amin'ny aretina sohika.
jeudi, 07 mai 2020 13:18
7 mai: Journée Mondiale des orphelins du SIDA.
jeudi, 07 mai 2020 13:06
Toamasina : « Tsy maintsy atao ny ahavitana fitiliana PCR maro araka izay tratra », hoy ny filoha Rajoelina
Mihamaro ny tranga Coronavirus azo avy amin’ny fifampikasohan’ny olona na « cas contact » eto Toamasina. Manoloana izany dia nanome toromarika ny filoha Andry Rajoelina fa « Tsy maintsy atao ny ahavitana fitiliana maro araka izay tratra amin'ny alalan'ny PCR eto Toamasina, ary ho ampitomboina ihany koa ny fitiliana TDR ho alefa eto ».
Nanome toromarika ny tompon'andraikitra mba ho hentitra ihany koa ny filohan’ny Repoblika. « Mila manaraka antsakany sy andavany hatrany ireo fepetra napetraka ny mponina mba hisorohana ny loza mitatao amin'ny mpiara-belona sy ny firenena », hoy izy.